USolwazi Colleen Downs.
USolwazi Colleen Downs, i-South African Research Chair (i-SARChI) in Ecosystem Health and Biodiversity KwaZulu-Natal naseMpumalanga Kapa, ukhethelwe ekubeni yi-Honorary Fellow ye-American Ornithological Society (i-AOS).
Loku kuqokwa kwenza uSolwazi Downs omunye wososayensi abahlonishwayo abayikhulu abaqokelwe ukuba ngama-Honorary Fellow e-AOS kanti kuhlonipha umsebenzi wakhe emkhakheni weziyizinyoni nokuzinikela kwisayensi. Uqokwe ngamanye ama-Fellow e-Society ne-AOS Nominations Committee for Honorary Fellows.
I-Dean nenHloko ye-School of Life Sciences, uSolwazi Ademola Olaniran, umbongele uSolwazi Downs ngokuqokwa kwakhe, wathi kumfanele.
‘Ngizizwa ngihloniphekile ngaloku kuqokwa,’ kusho uSolwazi Downs, obonge labo abamkhethile nabeseke ukuqokwa kwakhe.
USolwazi Downs waqala ngowezi-1994 ukuphosa esivivaneni sokwenza ucwaningo olusezingeni lomhlaba e-University of KwaZulu-Natal kanti ubelokhu ethathwa njengomcwaningi wesifazane waseNyuvesi ovelele novame ukubhala amaphepha ocwaningo.
Uyahlonishwa emhlabeni ngomsebenzi wakhe emkhakheni wempilo yezilwane nezitshalo, ikakhulukazi izilwane ezinamathambo zasemhlabeni lapho esebenze khona ngezilwane ezinjengamankankane nezingwenya zase-Nile. USolwazi Downs usebhale amaphepha ocwaningo ezingeni lomhlaba abuyekezwe ngabalingani bakhe, igama lakhe lagcwala izinkundla zokuxhumana ezidumile, waba wumeluleki wezitshudeni ezenza ucwaningo ezevile ekhulwini.
USolwazi Downs uyi-Fellow ye-International Ornithologists’ Union, ilungu le-Academy of Science of South Africa, kanti waklonyeliswa ngendondo i-National Science and Technology Forum (NSTF)-South32 Award for Research Capacity Development yangowezi-2017. Waklonyeliswa ngendondo i-Zoological Society of Southern Africa Gold Medal ngowezi-2017 ngamangwevu akhe endimeni yezilwane e-Afrika eseNingizimu iminyaka eminingi. USolwazi Downs uwumengameli wokuhlonishwa we-BirdLife South Africa.
USolwazi Downs ubonge izitshudeni zakhe zocwaningo ngegalelo lazo endimeni yokucwaningo ehlanganisa imikhakha ehlukene, ikakhulukazi okuveza ukuthi ukushintsha indlela yokusebenzisa inhlabathi kuyiphazamisa kangakanani imvelo ngocwaningo olufana ne-Durban Research Action Partnership. Useke wacwaninga ngempilo yokuhlalisana yezilwane eziningi nokubekezela kwazo, egxile endabeni yokugcinwa kwemvelo, ukusetshenziswa komhlaba kanjalo nokuguquguquka kwesimo sezulu.
USolwazi Downs unguSihlalo we-Cape Parrot Working Group kanti uneminyaka engama-22 ebambe iqhaza kwi-Cape Parrot Big Birding Day. Unentshisekelo ngokufundiswa kwesayensi nokugqugquzela isayensi kwizakhamuzi, kanti uyayithakasela imikhankaso yokuvikela zonke izinhlobo zezilwane aseke wasebenza ngazo.